सय दिन सुखद अनुभव महसुस गरेको छु: मेयर सुरेन्द्र विष्ट - Dainik Nepal
सय दिन सुखद अनुभव महसुस गरेको छु: मेयर सुरेन्द्र विष्ट
दैनिक नेपाल २०७४ असोज ३१ गते १०:५८
भीमदत्तनगरका मेयर सुरेन्द्र विष्ट
भीमदत्त नगरपालिका मेयर सुरेन्द्र विष्टले नगर प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरेको सय दिन पुगेको छ । असार १४ गते निर्वाचनबाट निर्वाचित मेयर विष्टले असार २५ गते पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए । यस हिसाबले उनले भीमदत्तको नेतृत्व सम्हालेको सय दिन अर्थात तीन महिना १० दिन पुगेको छ । यस अवसरमा मेयर विष्टसित सय दिनको उलपब्धि, नगरपालिकाका समसया, चुनौती र समाधानका लागि चालिएका पहल लगायतका विभिन्न पक्षलाई समेटेर गरिएको कुराकानी:
तपाईको एक सय दिन कसरी लिनु भएको छ ?
हामी निर्वाचित भईसकेका छौ । भीमदत्त नगरपालीकाको विकासका लागी दृढ संकल्प गरेर अगाडी बढ्यौ । अजको परिस्थिती स्थानीय तहको विकासको जिम्मेवारीहो । तीन तहको राज्य पुनःसंरचना भईसकेपछि यसका आफ्नै अधिकार र कार्यक्षेत्र रहेका छन् । त्यसैले हामी नगरपालिका कर्मचारी साथीहरु र जनप्रतिनिधिहरु बिचमा तालमेल गरेर भीमदत्त नगरपालिकाको विकासका लागि जनताप्रति उत्तरदायि भएर एक किसिमको महत्वपूर्ण समझदारी भएको छ । त्यस्तै छोटो अवधिमा नीति नियम र कार्यक्रम बनाउनका क्रियाशिल भयौ । त्यसका लागि प्रत्येक वडामा गएर जनताको इच्छा अकांक्षा अनुसार प्राथमिकिकरणका आधारमा योजनाहरु तर्जुमा साथै बजेट बिनियोजन गरेको छौ । त्यसै गरेर नगरपालिका सञ्चालनका लागि पाँच वटा निर्देशिकाहरु पास गरका छौ । विभिन्न समस्याका बावजुद हामी थुप्रै कार्यक्रम प्रारम्भ गरेका छौ साथै अधुरा रहेका योजनाहरु लागि पनि अगाडि बढाएका छौ । विभिन्न औपचारिक र अनौचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएर जन अपेक्षा बुझ्ने र संयुक्त सहकार्यमा जनहितको लागि कार्यक्रमहरुको प्रारम्भ गरेका छौँ । भीमदत्त नगरपालिकाको विकासका लागि नगरवासी र अन्य व्यक्तित्वको सहयोग पाएका छौँ । यही नै सुखद अनुभव महशुस गरेको छु ।
तपाईको एक सय दिनको उपलब्धि के हो ?
हामी निर्वाचित गत आर्थिक वर्षको समाप्ति समय थियो । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति निर्माण तथा योजनाहरु तर्जुमाका साथै बजेट पेस गर्नु पर्ने थियो । त्यसका लागि हामी साउन २४ गतेसम्म हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुको यसै कार्यमा केन्द्रित भयौ । हामी यस आर्थिक वर्षका योजना कार्यन्यनका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौ । हाम्रा लागि दिन गन्दा एक सय भए पनि काम गर्नको लागि सय अपुग छ । हामी योजना कार्यान्यनका प्रतिबद्ध छौ र यसको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ । विकास र भौतिक योजना निर्माणका लागि बाहिर सूचना निकाल्न जिल्लाको दररेट कायम हुनु पथ्यो, त्यो एक महिना अगाडि मात्रै बनेको छ । कार्यक्षेत्र धेरै छन् तर त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारी समायोजन भएको छैनन् । काम धेरै छन् तर काम गर्ने कर्मचारी छैन । यस परिवेशामा पनि हामी केही कामहरुको थालनी गरेको छौ । नगरपालिका वडा कार्यालय प्रत्येक वडामा स्थापना गर्ने, छापा पशु चौपाया व्यवस्थापनको कुरा भई नै हाल्यो । त्यस्तै नगरपालिकाको चुस्त दुरुस्त सुशासनकालाई ६ ओटा बैठक आयोजना गरिएका छन् । नगरपालिकालाई स्रोत साधनमा सम्पन्न बनाउन एक थान लोडर, ४ थान टिपर र होम पाईप खरिद प्रक्रियामा रहेका छन् । व्यवस्थित सुविधा सम्पन्न शव वाहन किन्ने निर्णय भएको छ । सडक निर्माणका लागि सडक कालोपत्रेका लागि विभिन्न मितिका दरभाउ आव्हान गरिसकेका छौ । नगरपालिकामा सञ्चालन हुने सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्र्तगत विभिन्न १७ वटा सडकको निर्माणका लागि सहरी डिभिजन कार्यलयसँग समन्नय भएको छ । एकिकृत शहरी विकास कार्यक्रम अन्र्तगत नगरपालिका दिर्घकालिन योजना निर्माणका लागि ए.डी बी.को क्रण लगानी र नेपाल सरकारको पूर्ण अनुदानमा यहाँ पाँच वर्षको कार्यक्रम यहाँ सुरु हुँदैछ । त्यसमा सडक निर्माण गर्ने, सेप्टी ट्याङ्कीको पानी प्रशोधन गरी प्राङ्गारिक मलमा रुपान्तरण गर्ने, फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि निर्माण पक्षसँग सहकार्य भईरहेको छ । यसको आउँदो ६ महिना भित्र टेन्डर आव्हान गरिनेछ । भ्यू टावर निर्माणका लागि स्थलगत अध्ययनको भएको छ । त्यस्तै नगरवासीको गुनासो संकलनका लागि टोल फ्रि सेवा र हरेक वडामा फ्रि वाईफाई जडान भइरहेको छ । सम्भवतः अबको दुई/तीन यो सेवा सुरु हुन्छ । पार्किङ्ग शुल्क निर्धारण र चमेना गृहको निर्माण कार्य पनि भईरहेको छ । योसँगै म के जानकारी गराउन चाहान्छु भने हामी जनतासँगको सहकार्यमा जनताका अपेक्षाहलाई छिटो भन्दा छिटो पूरा गर्ने पक्षमा छौँ ।
छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन त गर्नु सक्नु भएन नि ?
नगर सभाको प्रथमको निर्णय नै यहाँ रहेको प्रमुख समस्या छाडा पशुचौपायाको व्यवस्थापन गर्ने नै रहेको थियो । यसको व्यवस्थापनका लागी अल्पकालिन र दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सकिन्थ्यो । त्यसका लागी आवश्यक निती निमार्ण गर्नु आवश्यक थियो । साथै यो समस्या भीमदत्त नगरपालिकाको मात्रै समस्या रहेन, यो कञ्चनपुरसँगै कैलालीको पनि समस्या छ । तर पनि सबैको समस्या हुँदाहँुदै पनि हामी राजमार्गसँग जोडिएका ४ वटा नगरपालिका प्रमुख एवम प्रतिनिधि र सरोपकारवाला सम्पूर्ण पक्षहरुसँग यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल ग¥यौँ । र यो सबैको साझा समस्या भएकाले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निणर्य ग-यौँ । यसका व्यावस्थापनका लागि कार्यदल निर्माण गरेर स्थलगत अध्ययनका लागि पठायौ । कार्यदलले भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नं. ९ नम्बर वडा नम्बर नौ ब्रह्मदेवको सिद्धनाथ मन्दिर संरक्षण समिति व्यवस्थापन गर्न तयार भनेको र जग्गाका लागि सामुदायिक वनले साधारण सभाको बैठकले निर्णय गरेर जिल्ला वन कार्यलयको स्वकृतिमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । त्यो त्यतिकै रहेको छ । यो समस्या जग्गा उपलब्ध नहुँदा रोकिएको छ । आवश्यक बजेटका सन्दर्भमा हामी ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छौँ । र निर्देशिकाको ड्राफ्ट पनि तयार भईसकेको छ । र अल्पकालिन समस्या समाधानका लागि स्थानीयहरुका पशु चौपाया छाडा नछोड्न आग्रह गरेका छौँ र सम्पूर्ण वडाको पशुको लगत संकलन कार्य सकिएको छ । जग्गा प्राप्ति भयो भने नगरपालिका लगानीका लागी तयार रहेको छ । त्यस्तै धेरै सेवाहरु वडाबाट हुने भएकाले आफ्नो वडामा रहेको छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापनक गर्न पनि निर्देशित गरेका छौँ ।
यो अवधिमा औपचारिक कार्यक्रममा नि निकै व्यत्त देखिनु भयो । यसले तपाईको कार्य योजना फरक पर्दैन ?
म जनताहरुको बिचबाट नगरवासिको सहयोगमा भीमदत्तको प्रमुखमा निर्वाचित भएको छु । मैँले नगर प्रमुखको जिम्मेवारी लिईरहदाँ खेरी नगरवासिको अपेक्षा अनुसार काम गर्न म उहाँहरुको अनुभव सुन्ने, सुझाव सल्लाह लिन लगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु । दिनका ४÷ ५ वटा कार्यक्रम हुन्छन् , सबै कुरा सुन्न र जन अपेक्षा बुझ्न सहभागी हुनुपर्दछ । यो मेरो नैतिक जिम्मेवारी पनि हो जस्तो लाग्छ । मैलै विभिन्न कार्यक्रममा सहभागीता भईरहदाँ खेरी पनि कार्ययोजना मिलाएको हुन्छु । हामी धेरै कुराका निष्कर्श निकालि सकेको छौ, अब त्यसको कार्यान्नयन समय आएको छ । हामीले काम गरेर देखाउनु पर्छ ।